Maka ụbọchị isii ị nwere n'efu Motosport Manager Mobile 6 | Gam akporosis
Na-agba ọsọ! Motosport Manager Mobile 3 n'efu n'efu ụbọchị 6
Motosport Manager Mobile 3 bụ n'efu maka ụbọchị isii. Anyị na-ekwu maka egwuregwu ịme egwuregwu motorsport nke na-efukarị euro 6, yabụ ọ bụ nnukwu ohere ịbụ onye njikwa nke otu F4,49.
Ee ee, ị ga-enwe njikwa yana mkpebi n'ime agbụrụ nke otu ìgwè ya na ndị ọkwọ ụgbọala ya abụọ ga-enye ihe ha niile na agbụrụ nke oge. Otu n'ime ndị simulators kacha mma anyị nwere taa na gam akporo.
Oge na-adịghị anya anyị gafere nyocha anyị ka i wee mara ya nke oma. Na anyị nwere ike ikwu maka ya nke anaghị ama ama. Nwere ike iku ndị ọkwọ ụgbọ ala, imepụta ụgbọ ala gị, tinye ego na teknụzụ, soro ndị ọkwọ ụgbọ ala rụọ ọrụ iji melite laps, imewe olulu akwụsị na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọbụna ị ga-ahụ agbụrụ dị iche iche ozugbo iji kpebie atụmatụ ahụ mgbanwe nke wiil ma ọ bụ n'oge ahụ nke nwere ọghọm na ụgbọ ala nchekwa na-aga n'okporo ụzọ.
Ka anyị kwuo na anyị nọ tupu egwuregwu ahụ nke ahụ kachasị ulatesomie ezigbo asọmpi F1. Enweghị ezigbo ndị otu, mana ọ baghị uru, ebe ọ bụ na ị ga-enwe otu ahụmịhe na n'elu ya site na mkpanaka gị. Anyị na-ekwu maka mbipụta nke atọ nke Motosport Manager Mobile 3 yana na ọ nweela akụkụ nke mbụ na nke abụọ.
Nke atọ a bụ nke ahụ mezue ihe niile anakọtara na aga ịbụ egwuregwu pụrụ iche. N'ezie, enweghi oke ụkọ sekit dị ka nke ahụ na Monaco ma wepụta ya na nke atọ nke Motosport Manager Mobile.
Yabụ ugbu a ị ga - aga ịkwadebe maka vitiate a Egwuregwu 1 nke akpọrọ Motosport Manager Mobile 3 na nke ahụ ga-etinye gị na ihu mgbanwe ihu igwe, ihe ọghọm na ihe ahụ, na-emeri mmeri ụwa, gịnị ka ị na-eche?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Na-agba ọsọ! Motosport Manager Mobile 3 n'efu n'efu ụbọchị 6
Brown Dust ugbu a na Spanish maka gam akporo igwe
Sony Xperia 5: Ihuenyo 21: 9 laghachi na imewe ohuru